Guddoomiyaha Gobolka Benaadir oo Joojiyey Dhismaha ka socda Dhulka ka soo horjeeda dekedda. – Radio Daljir
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir oo Joojiyey Dhismaha ka socda Dhulka ka soo horjeeda dekedda.
Febraayo 5, 2018 10:38 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa warqad si rasmi ah ku joojiyey dhismaha ka socda dhulka ka soo horjeeda Dekedda magaalada Muqdisho ee degmada Xamar-Jabab, kadib markii uu warbixin ka dhageystay waaxda dhul bixinta ee gobolka Benaadir. Waxuuna ku wargeliyey Hay’adaha ay khusayso joojinta hawlaha dhismaha, isagoo tilmaamay in aan loo dulqaadan karin in dhismayaal sharci darro ah laga sameeyo dhulalka danta guud.
“Cid walba oo isku dayda in dhulka danta guud ay dhismeyaal sharci darro ah ka sameyso tallaabo ayaan ka qaadi doonaa, joojinta dhismaha ka socda dhulka danta guud ee ka soo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho waa tallaabo aan uga golleenahay in dib loogu soo celiyo gacanta dawladda dhulalka danta ee ka maqan”.Ayuu yiri Guddoomiye Yarisow.
Shir looga hadlayso Dib u eegista Sharciga Socdaalka oo Kismaayo ka furmay
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya oo ugu baaqay shacabka inay Canshuurta Bixiyaan